Naghachi faịlụ ọ bụla site na Mac gị na EaseUS Data Recovery Wizard | Esi m mac
Naghachi faịlụ ọ bụla site na Mac gị na Ọkachamara Data Data EaseUS
Ọnwụ nke akwụkwọ, foto, vidiyo ma ọ bụ faịlụ ọ bụla ọzọ dị oke mkpa nye anyị bụ nchegbu na-ewetara anyị niile. Iji zere nke a, ọ bụ ihe a na - ahụkarị ịme akwụkwọ ndabere na draịvụ ike mpụga ma ọ bụ na ọrụ nchekwa igwe ojii, agbanyeghị, rue mgbe anyị mere akwụkwọ ndị ahụ, anyị nwere ike na mberede ida mkpa faịlụ. Ọbụna mbipụta ndị ahụ enweghị ike ịda ada n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere ike iku ume ugbu a karịa Ọkachamara EaseUS Data Recovery.
N'agbanyeghị ogologo aha ya, Ọkachamara EaseUS Data Recovery bụ a data mgbake software nke Mac dị mfe ma dị mma iji, nke ga-enyere anyị aka weghachite faịlụ ndị anyị na-ehichapụ na mberede ma ọ bụ na anyị enweghị ike ịnweta maka ihe ọ bụla. Ka anyị hụkwuo ihe ngwa ọrụ a bara uru nwere nke nwere ike ịzọpụta anyị karịa nsogbu karịrị otu.
1 Ọ dịghị ihe na-efu na EaseUS Data Recovery Wizard maka Mac
2 Gịnị faịlụ m nwere ike naghachi?
3 Ngwa ngwa, nchekwa ma dịkwa mfe iji dị na ntanetị ole na ole
4 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 11.8
Onweghi ihe furu efu Ọkachamara EaseUS Data Recovery maka Mac
Irè, con Ọkachamara data Iweghachite, enweghị faịlụ dị na Mac gị furu efuỌbụna ma ọ bụrụ na ịhụghị ya, ọbụlagodi na ịnweghị ike ịchọta ya, ọbụlagodi na ị maara na ị were ya gaa na egweri ihe ma wepu ya. Ugbu a ị nwere ike iku ume nke ọma karịa, belụsọ na ibichaala ọba gị otu puku ugboro n'usoro na ụdị "Bárcenas" dị ọcha.
Ọkachamara EaseUS Data Recovery es ihe kacha mma data mgbake ngwá ọrụ maka Mac, nchebe, ngwa ngwa na mfe iji.
Gịnị faịlụ m nwere ike naghachi?
Na ngwanrọ a, ị ga - enwe ike naghachi faịlụ niile na ị na-na na na-ehichapụ, site na draịva nke ịhazi ma ọ bụ nke enweghị ike ịnweta ma ọ bụ furu efu na Mac gị n'ihi ọnọdụ dị iche iche dị ka mmelite sistemụ dara, mmechi mberede, nkwụsị a na-atụghị anya nke nchekwa nchekwa mpụga n'etiti ederede, akụkụ nke nwere na mberede furu efu, mmebi ezighi ezi na mado omume, nsị nke ahịhịa na-enweghị ihe ọghọm, na ndị ọzọ.
Ọnọdụ ndị a niile bụ ụdị nke anyị na - eche mgbe niile "nke agaghị eme m" mana eziokwu bụ na ọ naghị eme, rue mgbe ọ ga - eme, na oge ndị ahụ dị egwu, bụ mgbe anyị kwesịrị ịnwe ngwanrọ nke na - enye anyị ohere weghachite vidiyo a nke ezumike anyị nke anyị na-agaghị enwe ike ịmeghachi, ma ọ bụ nkwekọrịta ahụ dị mkpa anyị zọpụtara.
Ma na mgbakwunye, ị ga-bụghị naanị na-enwe ike naghachi faịlụ site na gị Mac si draịvụ ike, kamakwa I nwekwara ike weghachite faịlụ ndị furu efu na mpụga HDD ma ọ bụ diski SDD, na pendrive, na ihe ọkpụkpọ multimedia, na SD, CF, XD ma ọ bụ MMC kaadị ebe nchekwa, camcorder, wdg..
Banyere ụdị faịlụ, EaseUS maka Mac es dakọtara na ihe karịrị 200 faịlụ otú i nwere ike naghachi photos, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ na PDF, Okwu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ format, dijitalụ akwụkwọ, ozi ịntanetị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ngwa ngwa, nchekwa ma dịkwa mfe iji dị na ntanetị ole na ole
Otu n'ime isi uru nke Ọkachamara EaseUS Data Recovery bụ na ọ bụ ọkachamara faịlụ mgbake software. Nke a na-egosi na ọ bụ a ngwaọrụ ukwuu nchebe, ngwa ngwa na, n'ezie, dị mfe iji, otú ị ga-adịghị mkpa ihe ọmụma pụrụ iche iji naghachi mmadụ na mberede furu efu faịlụ.
EaseUS maka Mac awade a dị nnọọ kensinammuo na mfe ọrụ interfacea na-eme ka ọ dị mfe maka ihe ọ bụla Mac ọrụ ịchọta na-agbake furu efu faịlụ ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na mfe na dị nnọọ ole na ole clicks. Ozugbo etinyere ngwa ahụ:
Họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Nwere ike ịhọrọ n’etiti akwụkwọ, vidiyo, onyogho, ọdịyo, ozi ịntanetị ma ọ bụ họrọ “typesdị niile” ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị chọrọ.
Ugbu a họrọ ebe ebe faịlụ ndị ahụ dị furu efu (cheta na o nwere ike ịbụ ihe mpụga disk, SD kaadị, gị Mac si draịvụ ike ...) na pịa «Doppler». Ọzọkwa, echefula na ị nwere ike họrọ n’etiti a »Ndenye ianomi» ma ọ bụ a «Deep ianomi». Ma ugbu a, chere naanị nkeji ole na ole ka usoro ahụ rụchaa.
A ga-egosi gị nsonaazụ gị na ihuenyo ahụ. Họrọ ihe ị na-achọ, ma ọ bụ nyo dị ka ọ bụla nke dị njirisi (aha, size, ihe e kere eke ụbọchị, faịlụ…) na ị nwere ike ugbu a naputa ha.
Ọkachamara EaseUS Data Recovery ọ chọrọ 32 MB maka ntinye n'ihi na ọ bụ a dị nnọọ mfe software dakọtara site OS X 10.6 n'ihu na ọbụna na-akwado macOS 10.14 (Mojave) Nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịnweta a free ikpe mbipute nke a data mgbake omume Mac ma ọ bụ mee onwe gị na nsụgharị zuru ezu na ebe nrụọrụ weebụ ya.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 11.8
Isi akwukwo ohuru nke software ohuru bu:
Nkwado maka macOS 10.14 (Mojave).
Na-enye gị ohere ịchekwa data niile enwetara na igwe ojii iji mee ka nchekwa nchekwa dịkwuo elu
Ihe nlele PDF faili
Chọọ aha folda akọwapụtara aha mgbe ị nyochachara ọrụ
Enye ohere ka i scanomi HFS na HFS + nkebi ngwa ngwa
Advanced mgbake nke .flac faịlụ, rụọ ọrụ àgwà tụnyere gara aga nsụgharị
Enye gị ohere iyo zoro ezo na usoro faịlụ na-akpaghị aka.
Obi abụọ adịghị ya na nnukwu ngwá ọrụ ga-abụ ihe ngwọta doro anya maka nsogbu anyị niile mgbe a bịara n'ịgbake faịlụ na-ehichapụ na mberede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Naghachi faịlụ ọ bụla site na Mac gị na Ọkachamara Data Data EaseUS
Youmara n'ezie ihe ị nwere ike ịbanye na Mac's USB C?
Ihe ngosi 16-inch MacBook na-egosi na beta kacha ọhụrụ nke macOS Catalina 10.15.1